Waa maxay afka hore oo xirmay sideese u shaqaysaa | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii, haddii aad had iyo jeer ka daawato cimilada telefishanka, waxaad maqashay inay jiraan dhowr nooc oo hore. Marka hore, waxaan helnaa wejiga diirran, ka kalena kan qabow iyo midka kale ee aan caadiga ahayn ee loo yaqaan xannibmay hore. Nooc kasta oo hore wuxuu leeyahay astaamo kala duwan iyo xaalado deegaan oo lagama maarmaan u ah inay dhacdo. Wejiga hore ee xirmay waa isku dhafka dhinacyada hore ee qabowga iyo diiran.
Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato arrimaha ku saabsan saadaasha hawada? Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walba oo ku saabsan wajiga hore ee qarsoon iyo farqiga u dhexeeya inta kale.
1 Waa maxay hore?
2 Noocyada hore
2.1 Hore qabow
2.2 Hore diiran
2.3 Foodda oo ay ku jiraan
2.4 Wejiga hore ee istaaga
Waa maxay hore?
Kahor ogaanshaha noocyada hore, qaab dhismeedkooda iyo cawaaqibka ay ku yeelan karaan cimilada, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado waxa uu yahay wejiga hore. Markaan ka hadlayno soo socd hore iyo inay keenayso cimilo xun, waxaan ula jeednaa xariijimo ay ku kala baxayaan laba hawo oo heer kul ah. Jihooyinkaas, annaga oo tixgelinayna heerkulka cimilo kasta iyo midka ugu dhaqsaha badan, waxaan u kala saari karnaa qabow, kulul, waayitaan iyo kuwa taagan.
Ereyga hore waxaa laga soo saaray luqadda militariga. Tani waa sababta oo ah markay cufnaanta hawadu soo gasho, waxay soo saaraan hawlo la mid ah waxa inta badan ku dhaca dagaalka. Waxaa jira ruxmo leh dabeylaha korontada, dabeylo xoog leh oo dabeyl iyo roobab wata.
Shaqaynta horgalayaashan waxaa badanaa go'aamiya isbeddelka cadaadiska Hawada. Dejinta qiimaha cadaadiska cimilada ee aan ka helno aag iyadoo loo eegayo qadarka cufnaanta hawo iyo heerkulkooda waxaa lagu magacaabaa nidaamyada cadaadiska cimilada. Nidaamyadan cadaadiska waxaa haga hawo-mareenka, maaddaama hawadu u janjeerto dhanka aagga ay jirto cadaadis dheeri ah oo u tagaya halka ay ka yar tahay.
Hordhaca waxaa saameyn ku yeelan kara qaabdhismeedka qaabdhismeedka dhulka. Barakaca hawada waxaa caqabad ku ah buuraha dhaadheer iyo biyo aad u tiro badan. Xaaladahaas, dhaqdhaqaaqa iyo isbedelka horgalayaasha ayaa gebi ahaanba isbadala.
Waxaan dooneynaa inaan falanqeyno nooc kasta oo hore ah iyadoo kuxiran astaamaha mid walba iyo sida ay ugu kala duwanyihiin hadba inta ka hartay saadaasha saadaasha hawada.
Wejiga hore ee qabow waxaa sabab u ah xariiq aan ku aragno degganaanta jawiga. Waxaa sababa maxaa yeelay cufnaanta hawo qabow ayaa ah mida ku dul wareegeysa hawo kulul. Markaad sii waddo hawo qabow waxay la kulmeysaa hawo diirran, nooc ka mid ah foorjooyin ayaa halkaas ka soo galaya hawada ka diiran. Hawada qabow waxay leedahay cufnaan sare maadaama ay leedahay heerkul hoose sidaa darteed, markay miisaameyso wax badan, waxay u janjeersataa inay soo degto oo qabsato godka ugu dhow dusha dhulka.
Dhanka kale, cufnaanta hawada kulul, oo cufan, si fudud ayaa dusha looga beddelaa oo dherer ahaan buu u kacaa. Marka cufnaanta hawada kulul ay kacdo oo ay ku jirto lakab sare oo hoos u dhac ku yimaada heerkulka ka hooseeya 0 darajo, waxay keentaa in hawadu isku uruursato taasoo keeneysa daruuro taagan. Waa daruurahaan kuwa keeni kara khalkhalka jawiga sida qubeyska oo ay la socdaan dabeylo xoog leh. Meelaha sare waxaa ka imaan doona duufaano baraf ah.
Marka hore ee qabowgu sii socdo, waxaan helnaa aag qoyan oo badan markii uu dhaafo, badiyaa wuxuu ka tagaa jawi qalalan. Marka hore qabow hore u socdo, waxay keentaa hoos u dhac fiiqan oo heerkulka ah. Waxay kuxirantahay aagga aan joogno iyo waqtiga sanadka ee ay dhaceyso, wejiga qabow badanaa wuxuu socdaa inta udhaxeysa 5 iyo 7 maalmood ugu badnaan.
Wejiga diirran waa midka ay hawadu diirran horay ugu socoto si ay u beddesho hawada qabow. Guud ahaan, marka weji diiran uu horumaro, waxay ka tagtaa raad ah heerkulka sii kordhaya iyo huurka. Kordhinta doorsoomayaashaan waxay keeneysaa in cadaadiska jawiga uu hoos udhaco, sidaas darteed waxaa jiri doona xoogaa aan roobab culus. Waxaa suurtagal ah in roobabka qaar ama dabeylaha dabeylaha ahi ay sameyn karaan duufaanno, haddii dusha sare ay u oggolaato.
Dhanka kale, waa caadi in la arko ceeryaamo hawo qabow markay ka horeyso wejiga diiran.
Waxaan hadda dooneynaa inaan sharaxaad ka bixinno xagga hore inta ugu wada iloobi ama ugu yar ee ay wada ogyihiin. Waana in wejiga hore la xiray la odhan karo waa isku dar labadaba. Nooca hore ee noocan ah inuu dhaco, waa inuu jiraa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u socda. Markay taasi dhacdo, hawada qabow ayaa kuleylka kuleylka ah waxayna u riixaysaa kor sababtoo ah waxay ku socotaa xawaare sare.
Waa markaa marka ay labada weji hore u socdaan midba midka kale gadaal. Sadarka sameeya oo kala saara labada hawadood waa waxa loo yaqaan afka hore ee qarsoon. Guud ahaan, horgalada noocan ah waxay la xiriiraan noocyada daruuraha sida strata oo ay la socdaan roobab fudud. Waxay badanaa ku samaysmaan aagagga cadaadiska hooseeya iyo marka meelahaas ay daciifaan.
Khariidadda cimilada, waxaad awoodi doontaa inaad aragto calaamadda hore ee xirmay maxaa yeelay waxaa lagu calaamadeeyay xariiq xariiq dhibic leh. Tan macnaheedu waa in calaamadaha hore ee qabow iyo kuwa kulul ay yihiin kuwa tilmaamaya jihada dhaqdhaqaaqa hore.
Wejiga hore ee istaaga
Ugu dambeyntiina, waxaan falanqeyn doonnaa wejiga hore ee taagan. Waa soohdin u dhaxaysa laba hawo. Mid kasta cufnaanta hawadu way ka xoog badan tahay sida tan kale, sidaa darteed midkoodna ma beddeli karo ama ma beddeli karo midka kale. Waxaan ka heli karnaa xaalado badan oo jawi hawo leh wejiga hore ee taagan. Guud ahaan guud ahaan waa roobab daba dheeraaday iyo cimilo diirran.
Dhowr maalmood ka dib, labada wejiba way kala firdhaan ama waxay noqdaan horimaad diiran ama hore qabow. Jihooyinkaan taagan waa kuwa ugu badan ee waqtiga xagaaga. Roobabka dheer ee laxiriira iyaga ayaa mas'uul ka ah daadadka xagaaga.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabaha ku saabsan wajiga hore ee xirmay iyo waxa uu kaga duwan yahay inta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Foodda oo ay ku jiraan
Fogaanta Dhulka ilaa Qorraxda